Football Khabar » बार्सिलोनाद्वारा च्याम्पियन्स लिग खेल्ने टोली घोषणा : को–को परे ?
बार्सिलोनाद्वारा च्याम्पियन्स लिग खेल्ने टोली घोषणा : को–को परे ?
सिजन २०१९–२० अन्तर्गत युरोपियन च्याम्पियन्स लिग खेल्ने बार्सिलोनाको टोली घोषणा भएको छ । बार्सिलोनाले नयाँ सिजनका लागि सो प्रतियोगितालाई केन्द्रित गरेर प्रारम्भिक टोली अहिले नै घोषणा गरेको हो । पछिल्ला चार सिजन लगातार प्रतियोगिताको फाइनल नपुगी आउट हुँदै आएको बार्सिलोना यसपटक उपाधि जित्ने दौडमा छ । त्यसका लागि उसले गत सिजनबाटै खेलाडी किन्न मोटो बजेटसमेत खर्चिएको छ । यसपटक उसले सबै कुरालाई ध्यान दिँदै जसरी पनि उपाधि जित्ने तयारी गरेको छ ।
यस्तो छ बार्सिलोनाको टोली :
गोलकिपर – मार्क आन्द्रे टर स्टेगेन, नेटो
डिफेन्डर – नेल्सन सेमेडो, जेरार्ड पिके, जिन क्लेयर टोडिबो, सामुएल उम्टिटी, जुनियर फिर्पो, जोर्डी अल्बा, क्लेमेट लेङलेट, मोउसा वागी, अरेग्यो, सर्जी रोवेर्टो
मिडफिल्डर – सर्जियो बुस्केट्स, अर्थुर मेलो, फ्रेन्की डे जोङ, अर्टुरो भिडाल, कार्लेस एलिना, हिरोइक अबे, सर्नेडास, इभान राकिटिक
फरवार्ड – लुइस स्वारेज, लिओनल मेस्सी, उसामान डेम्बेले, एन्टोनी ग्रीजम्यान
बार्सिलोनाले यसपटक च्याम्पियन्स लिगमा प्रि–सिजनमा चम्किएका कार्लेस पेरेजलाई च्याम्पियन्स लिग खेल्ने टोलीमा राखेन । त्यसैगरी, यसपटक र ला लिगामा डेब्यु गरेर चम्किएका युवा खेलाडी अन्सु फातीलाई पनि टोलीमा राखिएको छैन । तर, टिम ‘बी’ का हिरोइक अबे, अरेग्यो र सर्नेडासले पनि यसपटक युरोपियन प्रतियोगिता खेल्न पाउने भएका छन् । फाती उमेरको हदका कारण टोलीमा नरहेका हुन् ।
प्रकाशित मिति १८ भाद्र २०७६, बुधबार १५:३२